Momba anay - Xuzhou Chuancheng Glass Products Co., Ltd.
Xuzhou Chuancheng Glassware Co., LTD.is orinasa iray manamboatra orinasa manamboatra tavoahangy famokarana tavoahangy, teknolojia fanodinana, vokatra vita amin'ny vera borosilicate. Ny orinasa miaraka amin'ny rano, fitaterana an'habakabaka ary rivotra, akaikin'ny seranan'i Lianyungang. Manana tsipika famokarana arisialy 5 sy tsipika artifisialy 20, izay afaka mamoaka tavoahangy 2,8 tapitrisa isan'andro. Ny mpiasan'ny orinasanay efa misy dia mihoatra ny 500, ao anatin'izany ny mpiasa teknika zokiolona 28 za-draharaha ary mpiasa mpiambina amin'ny kalitao 15. Ny orinasanay dia manaraka hatrany ny serivisy, manao ny marina, manatsara hatrany, kalitao voalohany, mpanjifa laharam-pahamehana '.
Mamokatra karazany lehibe ny orinasa eto aminay
Miaraka amin'ny vokatra kalitao feno sy tanteraka ny rafitra fitantanana kalitaon'ny siantifika dia efa nametraka ny orinasam-barotra amin'ny mpanjifa an-trano sy vahiny maro izahay. Momba ny tsy fivadihana lehibe, ny tanjaky ny orinasa ary ny kalitaon'ny vokatra.
Nahoana no misafidy Xuzhou Chuancheng Glassware Co., LTD.
ur orinasa mamokatra karazan-java-dehibe 800 mahery: tavoahangy tantely, tavoahangy vera, tavoahangy vera, tavoara soja, tavoahangy, tavoahangy oliva, tavoahangy, tavoahangy divay, tavoahangy vera, tavoahangy vera masaka, tavoahangy furu tavoahangy, tavoahangy divay, tavoahangina divay ara-pahasalamana, tavoahangy ranom-boaka, tavoahangy fanafody, tavoahangy kafe, kaopy, tavoahangy, tavoahangy fitaratra, tavoahangy fitaratra, tavoahangy vera, rano itondrana, rano. Kaopy, tavoahangy misy tsiranoka am-bava, tavoahangy feno voankazo, tavoahangy divay masaka, tavoahangy voatabia, tavoahangina divay vary, tavoahangy makiazy, tavoahangy divay, tavoahangin-tsolika rivotra, tavoahangy misy tavoahangy, tavoahangy kolotsaina sy ny sisa. Azo ampiasaina amin'ny fanodinana lalina ny vokatra fitaratra izany toy ny ranomandry, ny fanapotehana, ny fanontana silk, ny fanaovana mofo, ny sokitra, ny seram-pofona, sns.